VaMugabe Voudza Dzimwe Nyika Zvinoda Kuitwa muNyaya dzeHutano, Asi Vanamukoti muNyika Vachironga Kuramwa Mabasa
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe nemusi weMuvhuro vakavhura zviri pamutemo musangano webazi reUnited Nations rinoona nezvehutano kana kuti World Health Organization kuVictoria Falls wechimakumi matanhatu nesere kana kuti 67th Session of the WHO Regional Committee for Africa Conference.
Asi pabva paita mhute munyika apo vanamukoti vakazivisa kuti vapa hurumende mavhiki maviri ekuti vave kuda kukanda mapadza pasi zvekare nenyaya yekusawirirana panyaya dzemihoro.
Vachitaura pamusangano uyu VaMugabe vati nyika dzemuAfrica dzinofanira kutsvaga mari kuendesa mari kumabasa ezvehutano uye vatiwo Zimbabwe yakaedza kuita izvi nekuumba homwe yeAids levy yave kubatsirawo munyaya yekurapa chirwere chegomarara.
Nyika dzemuAfrica dziri kukundikanawo chibvumirano chadzakaita kuAbuja, Nigeria muna 2001 chekuona kuti mari inosvika zvikamu gumi neshanu zvebhajeti yenyika zvaenda kunyaya dzezvehutano.
Munyori mukuru weZimbabwe Nurses Association VaEnock Dongo vanoti havasi kufara nenya yekuti vamwe vanamukoti vanoita basa rehumaneja nevanodzidzisa vanotambira mari shoma zvichienzaniswa nevari pasi pavo kana vari pasi ava vakashanda maawa akati wandei pane akatarwa kana kuti e"over time".
Vanoti vanamukoti vakatoendesa tsamba kuHealth Services Board, bhodhi rinoona nezvemari dzavo vachitaura nezvekuda kuramwa mabasa kwavo.
Asi mukuru weHealth Services Board Dr Lovemore Mbengeranwa vanoti vari kuziva dambudziko iri asi pari zvino hurumende haina mari.
Hurukurona naDr Lovemore Mbengeranwa